Ny Fanahin’i Jehovah no ato amiko, Satria nanosotra Ahy hitory teny soa mahafaly amin’ny malahelo Izy – FJKM Ambavahadimitafo Ny Fanahin’i Jehovah no ato amiko, Satria nanosotra Ahy hitory teny soa mahafaly amin’ny malahelo Izy |
Ny Fanahin’i Jehovah no ato amiko, Satria nanosotra Ahy hitory teny soa mahafaly amin’ny malahelo Izy
Publié le 19 janvier 2021 à 07:01
Fanompoam-pivavahana Alahady 10 Janoary 2021 teto amin’ny FJKM Ambavahadimitafo, nitoriana ny Tenin’Andriamanitra avy ao amin’ny Lioka 4 : 11 – 22 :
14ARY Jesosy niverina tamin’ny herin’ny Fanahy nankany Galilia; dia niely tamin’ny tany rehetra manodidina ny lazany. 15Ary Izy nampianatra teny amin’ny synagogan’ny olona ka nankalazain’izy rehetra.16Dia tonga tao Nazareta, izay nahabe Azy, Izy; ary araka ny fanaony dia niditra tao amin’ny synagoga tamin’ny andro Sabata Izy ka nitsangana hamaky teny. 17Dia natolotra Azy ny bokin’Isaia mpaminany; ary nony namelatra ny boky Izy, dia nahita ny teny voasoratra hoe:18,,Ny Fanahin’i Jehovah no ato amiko,Satria nanosotra Ahy hitory teny soa mahafaly amin’ny malahelo Izy;Naniraka Ahy hitory fandefasana amin’ny mpifatotra Izy,Sy fampahiratana amin’ny jamba,Hanafaka izay nampahorina,19Hitory ny taona ankasitrahan’i Jehovah’’ (Isa. 61.1, 2).20Ary rehefa nahorony ny boky ka naveriny tamin’ny mpanao raharaha, dia nipetraka Izy. Ary nandinika Azy ny mason’izay rehetra teo amin’ny synagoga.21Ary Jesosy niteny taminy hoe: Andro-any no efa tanteraka eto anatrehanareo izany soratra izany. 22Ary izy rehetra nankalaza Azy sady talanjona noho ny tenin’ny fahasoavana naloaky ny vavany, ka hoy izy: Tsy Zanak’i Josefa va Ity?